नेकपा फुट्छ, नेकपा फुट्दैन
नेकपा फुट्छ, नेकपा फुट्दैन, यतिबेला राजनीति र कूटनीतिक बृत्तभित्र यही चर्चा व्याप्त छ ।
नेपाली राजनीतिमा तातो बहस यही हो । यता कोरोनाको कहर, उता यही बहस । जनताको ज्यान कोरोनाको जोखिममा छ, ओलीको सत्ता पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षीको जोखिममा । नेकपाले के के न गर्ला भन्ने नेपालीहरु चिन्तित हुनथालेका छन् । जसरी सत्तादौड चम्केको छ, त्यसरी नै कोरोना समुदायमा फैलिन थालेको छ । चैत ११ देखि लकडाउन गरेर जिम्मेवारी पूरा गरेको ठान्ने सरकार खुला सिमाना र आवतजावत रोक्न नसकेर कोरोना फैलाइरहेको देखिन्छ ।
अर्कोतिर आफ्नो पार्टीभित्रको महाभारतलाई रोक्न सकेको छैन । जनता मरुन् वा बाँचुन, ओली र नेकपालाई मतलव देखिदैन । नेकपाभित्र कुर्सीको युद्ध जारी छ । नेकपा पंक्ति कतिसम्म असंवेदनशील छ भने कोरोना भाइरस अन्त्य नभएसम्म कोरोनासँग लड्ने उपायका लागि तैयार देखिदैनन् । सत्ता टिकाउने र सत्तामा जाने हतारो मुख्य मुद्दा बनेको छ । पदलोलुपताको पराकाष्ठा । कम्युनिष्ट बिग्रेपछि सर्वहाराको नाम पनि कसरी बदनाम गर्नेरहेछन् ? अव पार्टी फुट्ने संघारमा छ । ओली र प्रचण्ड कित्ताले नेकपाल एमाले र नेकपा माओवादी पार्टी दर्तासमेत गरिसके । यस्तो झगडालाई मिलाउँदै आउनुभएकी चिनियाँ राजदूता हाउ यान्छीको पनि अव केही नलाग्ने देखिन्छ । किनकि साम्राज्यवादी र बिस्तारवादीलाई ओली फालेर अर्को ल्याउनु परेको छ । यति हुँदा पनि विश्ेषकहरु भन्छन्, नेकपा फुट्दैन । ओलीविरुद्ध प्रचण्ड बाहिरी आवरणमात्र हो । मुख्य सवाल अमेरिका र चीन आमनेसामने भएका हुन् । तराजुको तुलो जता ढल्केला, उता परिणाम जानेछ ।
अर्थात नेपाल विदेशी खेलमैदान भयो । जनता मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा छन्, जनमत पाएकाहरु अरुको खेलौना बनिरहेछन् । यता प्रतिपक्षीहरु नेकपा फुट्यो भने सत्तामा साझेदारी पाइनेमा ढुक्क छन् । प्रम ओलीले राति राति भेटेर यस्तो संकेत दिइसकेका छन् । केपी ओली सरकारले केही राम्रा काम गरेका भए पनि कुशासन बढाएर र अपराधिकरण गरेर जघन्य गल्तीहरु गरेका छन् । हुँदा हुँदा फरक प्रकृतिको नेपाली सेनालाई समेत रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो नाकामयावीलाई लुकाउन बिबादमा तानेका छन् । निषेधाज्ञा, सटडाउन, सील गरेर ओली सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् । राजधानीलगायतका बिभिन्न जिललाहरुमा सवारीसाधन सञ्चालनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर सरकार कोरोनालाई निरन्तरता दिन खोजिदैछ कि ? ट्राफिक व्वस्थापन गर्न सरकार असक्षम भइसकेको छ । सरकार असफल, जनताको अटेरीपनले कोरोना फैलिन थालेको पक्का हो । केही जिल्लाहरु छाडेर बाँकी मुलुक कोरोनाको त्रासदीबाट त्राहिमाम छ । दिनहुँ संक्रमित बढेका छन् । मृतकको संख्या पनि बढेको छ । तर सरकारसँग अस्पतालमा सुविधा दिनसक्ने सामथ्र्य छैन । विराटनगरपछि वीरगञ्जमा पनि संक्रमितले एकपछि अर्को अस्पताल चाहर्दा चाहर्दै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । अस्पतालका वार्डहरु भरीसके । नयाँ बिरामीलाई कसरी उपचार दिने ? त्यो नै अन्यौलमा छ । प्रदेश सरकार संघीय सरकारको कमजोरी देखाइरहेको छ, संघीय सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ । २ नम्बरप्रदेशले केन्द्रमाथि असहयोग गरेको आरोप लगाइसक्यो ।
यता राजनीति लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ । अव नेकपा फुट्छ, आपातकाल लाग्छ, मध्यावधि हुनसक्छ, राष्ट्रपतिलाई सक्रिय पारिने छ, जे पनि हुनसक्छ भन्ने प्रचार बढेर गएको छ । धेरैपल्ट चीनले नेकपाभित्रको आगो निभाइसकेको छ । यसपल्ट डढेलो नै सल्केजस्तो अवस्था देखिन्छ । अव त चिनियाँ राष्ट्रपतिको सन्देशले पनि नेकपाभित्रको राजनीतिमा ओखतीको काम गर्न छाडेजस्तो छ । लाग्छ, अमेरिकातिर लागेको दक्षिणीको कडा दबाब आएजस्तो लाग्छ । त्यसैकारण सांसद, मुख्यमन्त्रीहरु रातारात काठमाडौं आएका छन् । नेकपाभित्रको यो राजनीतिले देखाइरहेको छ– जे पनि हुनसक्छ ।
तस्वीर स्पष्ट छैन । दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकार पनि पार्टि विभाजन भएर गिर्न पुग्यो भने कस्तो सन्देश जाला ? हिजोको मिलिजुली र आजको एकलौटी सरकारमा भिन्नता देखिएन । यस्तोस्थिति देखिएपछि प्रश्न उठेको छ– यो गणतन्त्र र यस्ता नेतालाई जनताले किन बोकिरहने ? मौसमअनुसार राष्ट्रियताको कुरा उठाएर न सरकार टिकिरहन सक्छ, न बिना एजेण्डा सरकार ढाल्नेहरुले नै चलाउन सक्नेछन् । यसैवीच गत शनिवार चिवन माडीका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालसहितको टोलीलाई बोलाएर प्रम ओलीले आउँदो रामनवमीसम्ममा ठोरीमा राममन्दिर निर्माण गर्न निर्देश दिएका छन् । बहुतै चलाख छन्– ओली । जनताको नजरमा हिरो बन्न चाहन्छन् । भलै उनी र उनको टिम नालायक र भ्रष्ट किन नहोस् ? मुलुक यतिखेर कोरोनाको महामारीसँग जुध्दैछ, नेकपाकोबहुमतको सरकार पार्टी टुक्रिने मोडमा पुग्यो । सरकार बनाउने जोडघटाउ सुरु भइसक्यो र रोगलाई जरोसँगै उखालेर फ्याँक्न भन्दा पनिरोगको कारण उत्पन्न हुने परिणाम कुरेर बसेका छन्– नेपालीहरु । निथारमा भन्नुपर्दा सम्पूर्ण समस्याको जड नै यो शासन व्यवस्था हो । गैरजिम्मेवार र जवाफदेही नलिने नेताहरुको प्रवृत्ति हो । यस्ताहरुलाई फाल्न छाडेर नेकपाल फुट्छ कि फुट्दैन भनेर समय खेर फाल्ने ? धन्नका छन् नेपाली जनता ।